ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. KristianSchmid ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ။ – Agri Digit News
Posted on Author adminComments Off on ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. KristianSchmid ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ။
တွေ့ဆုံစဉ် စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာ (ADS) လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် EUမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ၊ဝန်ကြီးဌာန က အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လယ်ယာကဏ္ဍ၊ ကျေးလက်ဒေသ ကဏ္ဍ၊ အာဟာရကဏ္ဍများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် EU ဘက်မှှ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ၏ ဝင်ငွေတိုးမြင့် ရေး၊ အာဟာရပြည့်ဝပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရသည့် အစားအစာများ ဖြစ်စေရေး ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ ကဏ္ဍပေါင်းစုံပါဝင်သော အမျိုးသားအာဟာရဆိုင်ရာ စီမံကိန်း၏ အာဟာရပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို လွယ်ကူချောမွေ့စွာ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် စီမံကိန်းအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း၊ လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း၊ ထိရောက်သော စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရေး ၊ တာဝန်ခံနိုင်မှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတို့တွင် ထိရောက်သော ပူးပေါင်းမှုများ ဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စရပ်များ ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။